मेरो कार्यकाल सहमति र सहकार्यको नमुना बन्नेछ - Karobar National Economic Daily
मेरो कार्यकाल सहमति र सहकार्यको नमुना बन्नेछ
query_builderApril 12, 2017 10:12 AM supervisor_accountकारोबार संवाददाता visibility2655
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणा । तस्विर : कारोबार
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५१ औं साधारणसभाले भवानी राणाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यकारिणी समिति चयन गरेको छ । गत कात्तिकमा गरिएको विधान संशोधनपछि पहिलो पटक वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने प्रावधानको कार्यान्वयनले राणा अध्यक्ष भएकी हुन् । संशोधित विधानअनुसार अध्यक्षका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचन नभए पनि वरिष्ठ उपाध्यक्षसहित तीन उपाध्यक्ष र कार्यकारिणी समिति सदस्यका लागि निर्वाचन भएको थियो ।
मुलुकमा राष्ट्रपति, प्रधान न्यायाधीश, सभामुखलगायतका महŒवपूर्ण पदहरूमा महिला नेतृत्व रहेका बेला निजी क्षेत्रको संघीय प्रतिनिधिमूलक संगठनमा राणाको चयनलाई धेरैले उत्साहजनक रूपमा हेरेका छन् । राणा आफूलाई महिला भएर नभई हरेक पटक पुरुष उम्मेदवारसँगै चुनावी प्रतिस्पर्धामा मात्र नभई जिम्मेवारी वहनमा पनि खारिएको तथा महासंघमा १२ वर्षसम्म रहँदा इमानदारीपूर्वक काम गरेकै कारण यहाँसम्म आउन सफल रहेको बताउँछिन् ।
नेपाल महिला उद्यमी महासंघको समेत नेतृत्व गरिरहेकी राणा लगानी बोर्डकी सदस्य पनि हुन् । उनीसँग महासंघको निर्वाचनमा देखिएको गुटबन्दी, उनको भूमिका तथा आगामी कार्ययोजनाका सम्बन्धमा कारोबारले गरेको कुराकानी ः
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५१ औं साधारणसभापछि अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको छ । कस्तो अनुभव भइरहेको छ ?
म दुई दशकदेखि चेम्बर आन्दोलनमा लागेको र १२ वर्षदेखि त उद्योग वाणिज्य महासंघमै प्रत्यक्ष रूपमा आबद्ध भएकाले मेरा लागि महासंघको नेतृत्व अप्रत्याशित होइन ।
महासंघमा दुई कार्यकाल कार्यकारिणी समिति सदस्य हुँदा मात्र नभई जिल्ला नगर क्षेत्रबाट उपाध्यक्षमा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाटै निर्वाचित भएकी थिएँ । यसअघिको निर्वाचनमा पनि म वरिष्ठ उपाध्यक्षकै उम्मेदवार थिएँ ।
त्यसैले महासंघमा मेरो निरन्तरता, निजी क्षेत्र र आर्थिक समृद्धिप्रतिको प्रतिबद्धता र आफूले पाएको भूमिकामाथिको इमानदारिताकै कारण मैले आज सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएकी हुँ । यसमा निश्चय नै खुसी त छँदै छु, तर यो जिम्मेवारीका लागि मानसिक रूपमा तयार भइसकेकी पनि थिएँ । सँगसँगै मेरो काँधमा पहिलेदेखिको जिम्मेवारीमा केही थपिएको पनि महसुस गर्दै छु ।
पहिलो महिला अध्यक्षका रूपमा आउनुभएको छ, मुलुकमा जताततै महिलाले नेतृत्व गर्ने लहर चलेका बेला तपाईंलाई पनि त्यही समावेशीकरणको मुद्दाले माथि पुर्याएको भन्ने पनि आरोप छ नि ?
उद्योग वाणिज्य महासंघको विधानमा आरक्षणको कुनै व्यवस्था छैन । म अहिलेसम्म सधंै समान स्तरको प्रतिस्पर्धाबाटै माथि उठेको हुँ । मभन्दा कैयौं वर्ष पुराना साथीहरू पनि हुनुहुन्छ र नयाँ पनि उत्तिकै हुनुहुन्छ । त्यो भीडमा प्रतिस्पर्धा गरेर आफूलाई सक्षम सावित गराउनेले नै नेतृत्व पाउँछ । मैले कहिल्यै म महिला भएकाले नेतृत्व पाउनुपर्छ भनेर दाबी गरिनँ ।
म जिल्ला नगरबाट लोकप्रिय मतसहित माथि उठेकी हो भने आज पनि जिल्ला नगर, वस्तुगत र एसोसिएटका धेरै साथीहरू निजी क्षेत्रका कुनै समस्या पर्दा मलाई नै सम्झन्छन् । महिलालाई उद्यमी बनाउनका लागि तथा उनीहरूको सशक्तीकरणमा पनि म उत्तिकै सक्रिय छु र महिला उद्यमी महासंघमा पनि अध्यक्ष नै छु । त्यसैले मेरो इतिहास बुझ्न सबैलाई आग्रह गर्छु ।
महासंघमा विगतका निर्वाचनले धेरै गुट–उपगुट निर्माण गर्याे भनेर विधान संशोधन गरियो, तर यस्तो प्रवृत्ति त रोकिएन नि ?
हामीले पछिल्ला तीन निर्वाचन हेर्यौं भने निर्वाचनमा चरम बेथिति पाउँछौं । त्यसबाट शिक्षा लिएरै अग्रजहरूको सुझावबमोजिम विधानमा संशोधन गरेका हौं । यसको एउटा उद्देश्य तपाईंले भन्नुभएजस्तै निर्वाचनका बेला हुने अस्वाभाविक र अमर्यादित गतिविधि रोक्नु नै हो भने यसबाहेक अरू पनि उद्देश्यहरू थिए ।
यसले मूलतः नेतृत्व विकास र महासंघमा अविच्छिन्नतालाई पनि जोड दिएको छ । महासंघमा नेतृत्व लिनेले कम्तीमा पनि १२ वर्ष सक्रियतापूर्वक महासंघमार्फत निजी क्षेत्रको सेवा गर्नुपर्छ । यसमा हिजोको दिनको जस्तो महासंघ बाहिरबाट आएर पनि नेतृत्व लिन सक्ने अवस्था छैन ।
तपाईंले भन्नुभएजस्तो निर्वाचन नै नहुने अवस्था त यो प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा हुँदैन । आजको दिनमा निर्वाचन प्रक्रिया विधिपूर्वक भर्खरै सम्पन्न भएको छ । यसमा निश्चय नै केही कमी–कमजोरी भए होलान् तर हिजोको दिनको जस्तो भने पक्कै भएन । हामीमा हिजोका चुनावको केही ह्याङओभर छ र त्यसका कारणले पनि यसपटक यस्तो समस्या देखिएको होला । भोलिका दिनमा भने निश्चय नै यो रहनेछैन । विधान संशोधनको लक्ष्य र उद्देश्य पूरा हुनेछ ।
तपाईं स्वतः अध्यक्ष हुने व्यक्तिदेखि तत्कालीन अध्यक्षसमेत कुनै एक समूहमा यसरी खुलेरै लाग्नुलाई कसरी स्वाभाविक भन्ने ?
हामी तपाईंले भन्नुभएजसरी खुलेरै लागेको भन्ने आंशिक मात्र सत्य हो । हामी त जुन समूहले बोलायो त्यही समूहको कार्यक्रममा गएका थियौं । अनुप मल्लजीलगायतका साथीहरूको कार्यक्रममा गएर हामीले सम्बोधन गर्दै शुभकामना पनि दिएका हौं ।
महासंघमा जो निर्वाचित भएर आए पनि सँगै काम गर्नैपर्छ भन्नेमा म सचेत थिएँ । तर, तपार्इंहरूले बुझ्नुपर्ने के छ भने हिजोका दिनमा महासंघभित्र रहँदा कसले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्याे अथवा कसको क्षमता कति छ भन्ने हामी चेम्बर आन्दोलनमा लागेर यत्रो वर्ष बिताइसकेकाहरूलाई थाहा नहुने कुरै भएन ।
पशुपति मुरारकाजीले पनि आफूले सुरु गरेका राम्रा कामको निरन्तरताका लागि मलाई समर्थन गर्नु स्वाभाविक हो भने मैले टिमको नेतृत्व गर्नुपर्ने भएकाले आफ्ना एजेन्डादेखि निवर्तमान अध्यक्षको कार्यकालमा सुरु भएका एजेन्डालाई सही दिशामा अघि बढाउन को उपयुक्त हुनेछ भनेर मूल्यांकन अहिले गर्न सकेनौं भने भोलिका दिनमा काम गर्न गाह्रो हुनेछ भनेरै शेखरजीको टिमलाई साथ दिएको हो ।
अर्कातर्फ हरेक सफल नेतृत्वकर्ताले आफ्नो उत्तराधिकारीमा सही व्यक्तित्व छान्न सकेन भने उसको सफलता आधा मात्रै मापन हुन्छ भनिन्छ । हिजोका दिनमा पशुपतिजी र म सँगै चुनाव लड्यौं तर सहकार्यमा कुनै समस्या रहेन र मैले पनि आउँदा दिनमा यस्तै खाले संस्कार भएका व्यक्तिहरू नै महासंघमा आऊन् भन्ने चाहेको हो ।
तपाईंहरूले सहमतिको प्रयाससमेत गर्नुभएन भन्ने पनि आरोप छ नि ?
तपाईंले हेर्न सक्नुहुन्छ, दुई महिनाअघि एसोसियटमा कति जना उपाध्यक्षको उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो । ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानजी र सौरभ ज्योतिजी दुवै जना सक्षम र अनुभवी हुनुहुन्थ्यो । निर्वाचनमै गएको भए हामीले तीन जनामध्ये दुई जनालाई गुमाउनुपर्ने अवस्था थियो ।
एसोसिएटमा जसरी सर्वसम्मतिको प्रयास सफल भयो, हामीले वस्तुगतमा पनि अञ्जनजीलाई त्यसैगरी सहमत गरायौं । सहमतिका लागि कसैलाई अन्य भूमिका दिएर राख्ने एउटा विकल्प हो भने कुनै बेला ठूलो ग्याप सिर्जना गरेर पनि सहमतिका लागि बाध्य बनाउन सकिन्छ भन्ने मान्यता रह्यो ।
टिम छनोटमा पनि तपाईंहरूले आफूखुसी गर्नुभयो, सन्तुलन मिलाउन सक्नुभएन भन्ने आरोप छ नि ?
महासंघमा दुई दशकभन्दा बढी बिताइसक्नुभएकै धेरै व्यवसायी हुनुहुन्छ भने अर्कातिर युवा जोस र केही गरौं भन्ने भावना भएकाहरूले पनि एक दशकभन्दा बढी बिताइसक्नुभएको छ । बाबुबाजेले महासंघमा पु-याएको योगदानलाई निरन्तरता दिएर नयाँ उचाइमा पुर्याउँछु भन्ने पनि धेरै नै हुनुहुन्छ ।
यस्तै, नयाँ र आशालाग्दा व्यावसायिक घरानालाई पनि महासंघमा नभित्राएसम्म यसले गति लिन सक्दैन । यस्तै, क्षेत्रगत तथा वस्तुगत सन्तुलन पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । यसरी महासंघलाई सबै खाले व्यवसायीको साझा पूmलबारी बनाउन केहीले कम्प्रोमाइज त गर्नैपर्छ ।
पुरानालाई यथावत् राखेर नयाँलाई आउनै नदिने हो भने पनि संस्था गतिशील हुँदैन भने सबै नयाँ नभित्राएर पुरानाको भूमिका अवमूल्यन गर्ने हो भने पनि संस्थालाई जीवन्त बनाउन सकिँदैन ।
यसैले, यस्तै अनेकतामा एकता खोज्ने हो । यो क्रममा केही कमी–कमजोरी भए होलान्, तर उहाँहरू अहिले टिममा पर्नुभएन भने पनि विभिन्न समितिमा रहेर योगदान पु-याउन सक्नुहुन्छ । उहाँहरू सबैले मलाई विश्वास गरेर यो जिम्मेवारी दिनुभएको छ भने मैले पनि उहाँहरू सबैलाई मिलाएर लैजाने प्रण गर्छु ।
महासंघको यस पटकको निर्वाचनमा वरिष्ठ उपाध्यक्षहरूले पनि एजेन्डा घोषणा गरेको देखियो, यसले त वरिष्ठ उपाध्यक्षको एजेन्डामा अध्यक्ष हिंड्ने कि अध्यक्षको एजेन्डामा वरिष्ठ उपाध्यक्ष हिंड्ने भन्ने समस्या भोलिका दिनमा देखिंदैन र ?
हो, यसमा कता–कता केही नमिलेको हो कि जस्तो अवश्य पनि देखिएको छ । विगतमा विधानले नै वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई सेरेमोनियल भूमिकामा राखेको थियो । उहाँको काम त अध्यक्षको अनुपस्थितिमा नेतृत्व गर्ने नत्र सधैं अध्यक्षलाई साथ र सहयोग गर्ने नै हो ।
यद्यपि, मैले आफ्नो भिजन धेरै साथीहरूलाई सेयर गरिसकेको थिएँ र सोही स्पिरिटमा मिल्ने गरी उहाँहरूले आफ्नो एजेन्डा बनाउनुभएको देखेर खुसी पनि लागेको छ । उहाँहरूको पहिलो एजेन्डामै अध्यक्षलाई साथ र सहयोग गर्ने भन्ने भएकाले अबका दिनमा यसमा समस्या हुँदैन भन्ने नै लाग्छ ।
तपाईं अध्यक्ष भएपछि महासंघलाई अघि बढाउने एजेन्डाहरूचाहिं केके हुन् ?
मैले महासंघलाई यो बेला नेतृत्व गर्न पाउनुलाई अवसर र चुनौती दुवै रूपमा हेरेकी छु । मुलुकमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि संक्रमणकाल भने यथावत् छ ।
मुलुकको संघीय संरचनाअनुरूप महासंघको पनि सांगठनिक रूपान्तरण जरुरी छ भने अर्कातर्फ संघीयतामा गइसकेपछि निजी क्षेत्रले थप सहज वातावरणमा काम गर्न पाउनुपर्छ र अतिरिक्त भार बेहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु हुँदैन भन्नेमा हामी सधैं चनाखो छौं ।
यसबाहेक मुलुकको दिगो आर्थिक विकासका लागि सरकारसँग सहकार्य गरेरै हामी गन्तव्यमा पुग्नेछौं । यसका लागि महासंघ आफैं सरकारको थिंक ट्यांक बन्न तयार छ भने महासंघले पनि अबको निजी क्षेत्र कस्तो हुनुपर्छ भनेर विज्ञहरूबाटै सल्लाह सुझाव र परामर्श लिनेछ ।
हामी नीति–निर्माता होइनौं भने कार्यकारी भूमिकामा पनि छैनौं तर सरकारका हरेक नीति र निर्णयको पहिलो प्रभाव हामीलाई नै पर्ने भएकाले मुख्य सरोकारवाला हौं । त्यसैले हामीले सरकारसँग सहकार्य गर्नुको विकल्प छैन ।
नेपालको संविधान सबै राजनीतिक दलले स्विकारेका कारण सरकारमा जो गए पनि आर्थिक नीतिमा केही परिवर्तन हुनेछैन । यसरी नीति परिवर्तन गर्न खोजिए त्यो संविधान प्रतिकूल हुनेछ र हामी त्यसको प्रतिवाद गर्ने नै छौं । यसकारण आर्थिक स्वतन्त्रता, सम्पत्तिको हकजस्ता मौलिक अधिकार कुण्ठित हुने खालेका कुनै पनि निर्णय हामीलाई स्वीकार्य हुनेछैनन् ।
त्यसैले नीतिका विषयमा अब ठूलो बहस जरुरी नहोला, तर कार्यक्रमको निरन्तरता तथा हाल निर्माण भएका ऐनको कार्यान्वयन एवं पाइपलाइनमा रहेका ऐन नियम जारी गर्ने दिशामा हामी केन्द्रित रहनेछौं ।
महासंघले यसअघि गर्न नसकेका र तपाईंले गर्ने कुनै त्यस्ता नयाँ योजना पनि छन् ?
हामीले मानव संशाधन व्यवस्थापनका क्षेत्रमा काम गर्न खोजिरहेका छौं । युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी राष्ट्रिय उत्पादकत्व वृद्धि गर्न हामीले गर्नैपर्ने केही काम छन्, जसमध्ये आउँदो १० वर्षमा औद्योगिक, निर्माण, कृषि तथा सेवालगायतका क्षेत्रलाई कति जनशक्ति आवश्यक पर्छ, यसको आँकडा तयार गर्ने रहेको छ । दक्ष जनशक्ति तयार गर्न सरकारसँगको सहकार्यमा निजी क्षेत्रबाटै सञ्चालन गर्ने गरी प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गर्ने हाम्रो योजना छ ।
सबै राजनीतिक दलहरूको सहभागितामा अर्थतन्त्र विकासका लागि संकल्प प्रस्ताव पारित गर्ने, महासंघमा विज्ञ समूहको गठन गर्ने हाम्रा कार्यक्रम छन् । नेपाल र भारतबीच हुने व्यापारमा बेलाबखत देखा पर्ने समस्याको समाधान तथा गैरभन्सार अवरोध अन्त्यका लागि ‘नेपाल–इन्डिया इकोनोमिक समिट’ आयोजना गर्ने पनि मेरो योजना छ । यस्तै, स्वदेशी वस्तु खरिदको अनिवार्य व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने तथा मेड इन नेपालको ब्रान्डिङ गर्ने हाम्रो योजना छ ।
यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने नेपाली वस्तुको सूची तयार गर्ने, तिनको उत्पादनमा जोड दिने र कार्यान्वयनका लागि आवाज निरन्तर उठाउने योजना छ ।
मुलुक संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा महासंघले यसलाई कसरी आत्मसात् गर्नेछ ?
हाम्रो संशोधित विधानअनुसार प्रत्येक प्रदेशमा अब प्रदेश उद्योग वाणिज्य संघ रहनेछन् । प्रादेशिक उद्योग वाणिज्य संघहरू पनि निकै शक्तिशाली हुनेछन् र यिनमार्फत उद्योग वाणिज्य महासंघ कम पुँजीमा सञ्चालित उद्योग–व्यवसायसम्म पुग्नेछ ।
यस्तै, महासंघको सांगठनिक सुदृढीकरण तथा सशक्तीकरणका लागि जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य संघको क्षमता अभिवृद्धि हाम्रो एजेन्डामै रहेको छ । सचिवालयको आधुनिकीकरणसहित बृहत् सुधार पनि हामीले आफ्नो एजेन्डामा राखेका छौं ।
उद्योग–व्यवसायका लागि अहिले जग्गा प्राप्ति ठूलो समस्या बन्दै गइरहेको छ, यसको समाधानका लागि महासंघको भूमिका कस्तो हुनेछ ?
पक्कै पनि हामी यसमा काम गर्नेछौं । जग्गा प्राप्ति उद्योग व्यवसायका लागि मुख्य समस्या भएकाले यसको निरूपणका लागि राज्यले अघि सारेको भूउपयोग नीतिको अवधारणा अघि सारेको छ ।
यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारका सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गर्नेछ भने सरकारसँग रहेका जग्गा लिजमा लिन सक्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नेछौं । अर्कातर्फ, मुलुकका प्रमुख सात सहरमा स्मार्ट सिटी स्थापना गर्ने, यसका लागि निजी क्षेत्रले विश्वका प्रमुख सहरहरूको अध्ययन गर्दै त्यसको मोडल विकास गर्ने हाम्रो योजना छ ।
संघीय संरचनामा कर विवाद बढ्ने अनुमान गरिएको छ नि ?
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि हाम्रो साधारणसभामा दोहोरो कर नलाग्ने भनिसक्नुभएको छ । हामी संघीयतामा जाँदा मुलुकको निजी क्षेत्रले करका विषयमा अतिरिक्त भार बेहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्छौं र यसका लागि महासंघले सशक्त रूपमा निरन्तर उठाइरहनेछ । महासंघमा यस सम्बन्धमा गुनासो सुनवाइ एकाइ स्थापना गरी समन्वयात्मक तवरले काम गर्ने हाम्रो योजना छ ।
लगानी बोर्ड नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ भवानी राणा नेपाल महिला उद्यमी महासंघ